Unokundinceda ngethuluzi legama elingundoqo elinokuthenjwa kwe-Amazon ukulungiswa kwee-Amazon?
Ukuba nephepha elifanelekileyo lomkhiqizo olungiselelwe kakuhle kwi-ecommerce SEO kwaye ephosiweyo ngexhobo elithengiweyo elikhethiweyo kwi-Amazon lithetha ukuba unokutsala ingqalelo enkulu kubathengi abafuna izinto ezithengiswa ngaphaya kwalapho. Ngokufanelekileyo, ukuguqula isabelo seengonyama salaba bathengi abangenakuthuthukiswa kubathengi bokwenene abathengayo kunye nawe. Kwaye ukubeka isethi esilungeleleneyo yegama eliphambili ekujoliswe kuyo kwiindawo ezikuko kuya kukunceda. Kakade, akukho uphando lwe-niche oluya kukwazi ukuqhuba isitoreji sakho sokuthumela i-drop-shipping ukuya kwimpumelelo enkulu, ubuncinane yodwa. Kwaye kungakhathaliseki ukuba yintoni ekujoliswe ngqo kuyo. Ndiyathetha ukuba ukuba ngumthengisi oyenzayo ngokwenene kwi-Amazon, kukho ezinye izinto ezibalulekileyo eziza kuhlolwa ngenyameko, zilungelelaniswe kwaye ziqwalaselwe ngokuphindaphindiweyo.
Akunakutsho nje ukuba kunjani nayiphi na enye indawo yokuthengisa izitena kunye neyodaka, le ndawo iphambili ye-ecommerce ilawulwa ngokukodwa ngamanani okuncintisana, kunye negunya ngalinye lomthengisi kunye ku thembeka. Nangona kunjalo, ngokuphanda ngokuchanekileyo ngophando lwe-niche usebenzisa i-Amazon efanelekileyo yegama elingundoqo, unokwenza izinto zibe lula. Emva kwakho konke, mhlawumbi yindlela ebonakalayo kuphela yokufaka ukuqhutyelwa okuqhubekayo kubasebenzisi abaphila ngokukhawulezayo xa befuna ezinye zezinto onokuzithengisa. Ngaloo ndlela, ngezantsi zikhetho ezintle zokukhetha ukhetho lwakho lwegama elibalulekileyo lwe-Amazon kunye neliwa elalixhamle emakethe yemveliso kunye nomnxeba wakho wokuveliswa kwemveliso eboniswe phezulu kwimveliso yecandelo phezu kwalo.
I-Keyword Tool Dominator
Umncedisi wokuqala we-intanethi ndiyakuncoma namhlanje ukuba yiNtloko yeSixhobo esiNgcaciso.Phakathi kwamacala alo anamandla, kukho inkonzo ephakamileyo ye-keyword yokusikisela engakunika umfanekiso omkhulu wazo onke amagama asemqoka kunye nemigca yokukhangela emide emasetyenziswe ngabathengi abaphila kwi-Amazon. Ngaloo ndlela, uya kuhlala ukwazi ukwenza ngokufanelekileyo, uhlala ulungele ukufaka isicelo semigaqo yokucwaninga efunyenwe ekuthandeni ngoku kwaye ngokuqinisekileyo kulindeleke ukuba ibe yinto ethe tye ngakumbi ngexesha. Ngomxholo osisiseko ofumanekayo ekufikeleleni okuvulekile unokugijima ukufikelela kwimibandela emithathu ekhethiweyo yamagama angundoqo. Kwaye unokuhlawula ngokukhawuleza ii-bucks ezili-16 ukuze ujabulele inguqu epheleleyo yeoli yesalathisi sale sixhobo.
Elinye ilitye elingundoqo legama le-Amazon, elona lisebenza ngokukhawuleza xa lifika ekupheliseni zonke izinto eziphambili okanye ukukhangela kwexesha elide amabinzana - phantse ngaphandle kwexesha. I-Scientific Seller iyisithuluzi samahhala e-intanethi ukuxhasa uluhlu lwemveliso yakho kwi-Amazon eneengqiqo ezinokubambisana kunye neengcebiso eziphambili ezixhomekeke kumxholo wakho okanye umkhiqizo. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ukwenza ezininzi kwiScientific Seller Ndiyincoma ukuba uyisebenzise kunye ne-Google Keyword Planner. Ngaloo ndlela, uya kuthintela nayiphi na ingxaki, njengokuba kungekho nani lexabiso elihambelana namagama angundoqo okanye amagama e-long-tail search abonakala engafanelekanga Source .